Naya course » माहामारीसँग लड्न के गर्दैछन् नेकपा बाँकेका स्थानीय कमिटीहरु ? माहामारीसँग लड्न के गर्दैछन् नेकपा बाँकेका स्थानीय कमिटीहरु ? – Naya course
माहामारीसँग लड्न के गर्दैछन् नेकपा बाँकेका स्थानीय कमिटीहरु ?
राहात संकलन, पैदलयात्रीको उद्धार,रक्तदान र लक डाउन पालनाका लागि स्वयम् सेवक परिचाल लगायतका काम गर्दै
कोहलपुर/ बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (क) ले मंगलबार बैजनाथ गाउँ पालिकालाई ५ सय बोरा चामल सहयोग गरेको छ । कार्यकर्ताबाट मानो मुठि संकलन गरेर ५ सय बोरा चामल पालिकालाई सहयोग गरेको ३ (क) का ईन्चार्ज नरेन्द्र पाण्डे (जेम्स)ले जानकारी दिएका छन । कमिटीले पुर्व मन्त्री दल बहादुर सुनारको नेतृत्वमा राहात संकनल समिती गठन गरेर राहात संकन गरेको हो । ईन्चार्ज जेम्सले राहातका साथै यस क्षेत्रका सबै १२ वटै वडाहरुमा लक डाउनलाई प्रभावकारी बनाउन बिशेष अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
पुर्व मन्त्री सुनारले पार्टी कार्यकर्तासंग मानो मुठि र केहि सहयोगी दाताहरुसंगको सहकार्यमा राहात संकलन गरेर पहिलो चरणमा ५ सय बोरा पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । उनले जनताको दुख सुखमा साझेदार हुनका लागी राहात संकलन गरिएको बताउदै थप राहत संकलनको काम समेत भई रहेको नयाँ कोर्स लाई जानकारी दिए । नेकपा बैजनाथले राहत र सचेतनाका साथै बैजनाथ १ चिसापानीमा सामुहिक खान खुवाउने व्यवस्था गरेको नेकपा जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य एंव बैजनाथका नेता घननाथ खनालले जानकारी दिए । उनले दैनिक २ सयको हाराहारीलाई खाना खुवाउने र कर्णाली प्रदेश तर्फ पुर्याउने काम भई रहेकोे जानकारी दिए । पालिकासंगको साझेदारीमा खाना खुवाएर उनिहरुलाई कर्णालि प्रदेशका बिभिन्न जिल्ला पुर्याउने गरिएको नेता खनालको भनाइछ ।
यस बाहेक लकडाउनका कारण कृषि उद्यमी लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको असर बारे स्थलगन निरिक्षण गर्ने र क्षतिको प्रकृति अनुसार स्थानीय तहका साथै केन्द्र र प्रदेशलाई सिफरिस गर्ने काम भई रहेको नेकपा बैजनाथका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थारुले जानकारी दिए ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) का संयोजक रक्षा राम बर्माले पार्टीको तर्फबाट राहात संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले भारतिय सिमासंग जोडिएको हुँदा भारतिय तरकारी नियन्त्रण गर्ने अभियान पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । सिमा क्षेत्रमा पनि भारत तर्फबाट मानिसहरु आउन सक्ने भएको कडा निगरानि गर्न युवा स्वयम सेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
बाँके क्षेत्र नं १ का संयोजक सुर्य ढकालले क्षेत्रिय ईन्चार्ज प्रकास सुवेदीको नेतृत्वमा सहयोग संकलन सुरु गरेको जानकारी दिए । संकलित रकम पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गरिने नयाँ कोर्सलाई जानकारी दिए ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) का ईन्चार्ज नरेन्द्र न्यौपानेले आफुहरु राहात संकलनसंगै बिभिन्न जिल्लाबाट हिड्दै आएका पैदल यात्रीलाई गन्तब्यमा पुर्याउने अभियान संञ्चालन गरेको जानकारी दिए । उनले लक डाउनलाई पुर्ण पालनाका लागि कमिटीहरु परिचालन गरेको जानकारी दिए । उनले रक्तदान , पि पि ई सहयोग र नाकामा युवा स्वयम सेवक परिचालन लगायतका कामहरु गरिएको बताए ।
क्षेत्र नं १ क का संयोजक अब्दुल हुसेन खानले राहात संकलन गरि वडा कार्यालयहरुसंगको सहकार्यमा वडा स्तरमा बितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले रक्तदान कार्यक्रम , बिभिन्न संघ सस्थासंगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सस्थाहरु लाई पि पि ई बितरण लगायतका कार्यक्रम गरेको बताए । उनले गैर आवसिय नेपाली र मन्त्री आरती पौडेलको सहयोगमा १ सय ३८ थान पि पि ई यस क्षेत्रका बिभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहयोग गरेको बताए ।
नेकपा कोहलपुरकी अध्यक्ष बसन्ती अधिकारीले स्थानिय सरकारलाई सघाउन बिभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताईन । उनले लक डाउनलाई पालना गर्न स्थानिय कमिटी परिचालन र कोहलपुर प्रबेश गर्ने ४ ओटा नाकामा स्वयेवक परिचालन गरेको जानकारी दिईन । उनले अति बिपन्न र अपाङ्गता भएकाहरु लाई बिभिन्न व्यक्ति संघ सस्थासंगको साझेदारीमा राहात समेत उपलब्ध गराएको बताईन । उनले क्षत्रिय कमिटीले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा पनि पालिकाले सहयोग पुर्याएको बताईन । उनले पैदल यात्रीलाई उद्धार तथा भोजनका लागि कोहलपुर चौराहमा हेल्प डेस्क स्थपना गरेको बताईन ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ ख का ईन्चार्ज पुजन विश्वकर्माले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार लक डाउनलाई पुर्ण पालन गर्न जनतालाई आग्रह गरेको बताए । उनले ३० दिन सम्म लकडाउनको पुर्ण पालना गरेका जनतालाई कोरोनाको महामारीको अन्त्य नहुदा सम्म सरकारको निर्दे सफल बनाउन आग्रह गरिएको बताए । उनले बिपन्न तथा मजदुर वर्गलाई दिने राहातमा मा बिभेद नर्गन राप्ती सोनारी गाँउ पालिका र नरैनापुर गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
नेकापा बाँके क्षेत्र नं २ कि ईन्चार्ज शान्ति ढकालले लक डाउनका कारण आधिकारीक बैठक बस्न नसकेपनि वडा कमिटीहरुलाई वडा सरकारसंग मिलेर राहत तथा उद्धारका काम गर्न निर्देशन दिईएको बताईन । उनले पार्टीको तर्फ बाट राहात संकलनका लागि पहल सुरु गरेको जानकारी दिईन ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं २ क कि संयोजक बिजया धितालले राहात संकलनका लागि छलफल भईरहेको जानकारी दिईन । उनले लक डाउनलाई पुर्ण पालनका लागि समेत वडा कमिटिलाई क्रियासिल बनाईएको बताईन । उनले नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा स्वयम सेवक परिचालन गरेर बिदेशबाट आउनेहरुको नामावली संकलन गरि स्थानीय सकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताईन ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ ख को ईन्चार्ज प्रेम भुषालले लक डाउनलाई पुर्ण पालना गर्न वडा कमिटि मार्फत सचेतना कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । उनले सिमा क्षेत्रबाट स्वदेशमा आउने मानिसहरु लाई सुरक्षाकर्मीसंग मिलेर कडाई गर्न स्वयम सेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिए । भारतिय बजारबाट आउने तरकारी प्रयोग नर्गन सचेतना फैलाईएको बताए । उनले राहात संकलनको सुरुवात गरिएको र छिटै स्थानिय सरकार मार्फत राहात बितरण गरिने जानकारी दिए ।
नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आई पि खरलले सवै कमिटहरुलाई लक डाउन लाई पुर्ण पालन र बिपन्नलाई राहात बितरणमा सघाउन पुर्याउन आ–आफ्नो तरिकाले योजना बनाए काम गर्न सबै तहका कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले सरकार र पार्टीका तर्फ बाट भईरहेका कामहरुको अनुगमन गर्न अनुगमन समिति र राहात बितरण लगायतका काम गर्न हरेक पालिकामा पार्टीका तर्फबाट फोकल पर्सन समेत तोकीएको जानकारी दिए ।